Ihowuliseyili B635A ekubumbeni mahcine yoMvelisi kunye noMthengisi | Lu Omncinci
B635A Ebumba i-mahcine
Umsebenzi wesicwangcisi se-bullhead unokujikeleza ngasekhohlo nasekunene, kwaye indawo yokusebenza inendlela ethe tye kunye ethe nkqo yokuhamba ngokukhawuleza; isetyenziselwa ukucwangcisa iinqwelomoya, ngaloo ndlela yandisa ububanzi bokusetyenziswa.
Umcwangcisi we-bullhead ngumcwangcisi owenza ukunyakaza okuhambisanayo. Inkunzi yegusha iphethe isicwangciso. Ibizwa ngokuba ibambe blade ngaphambili kwenkunzi yegusha ijongeka njengenkunzi yenkomo. Iiplani zeBullhead zisetyenziselwa iiplani zeenkunzi ezincinci kunye naphakathi. Uninzi lweentshukumo eziphambili zomcwangcisi we-bullhead ziqhutywa yinkqubo ye-crank-rocker, ke isantya sokuhamba kwenkunzi yegusha asilingani.
1. Umsebenzi wesicwangcisi se-bullhead unokujikeleza ngasekhohlo nasekunene, kwaye indawo yokusebenza inendlela ethe tye kunye ethe nkqo yokuhamba ngokukhawuleza; isetyenziselwa ukucwangcisela iinqwelomoya, ngokwenjenje yandisa umda wokusetyenziswa.
2. Inkqubo yesondlo somcwangcisi isebenzisa umatshini we-cam onamanqanaba ali-10 okutya. Kwakhona kulula kakhulu ukutshintsha inani lemela.
3. Isicwangcisi se-bullhead sixhotyiswe ngendlela yokhuselo olukhulu kwinkqubo yokusika. Xa ukusika kugcwele ngaphezulu ngenxa yokusebenza ngokungakhathali okanye amandla angaphandle, isixhobo sokusika siza kutyibilika sodwa, kwaye ukusebenza kwesixhobo somatshini kuqinisekisiwe ngaphandle kokonakala kwamalungu.
4. Phakathi kwenkunzi yegusha kunye nesikhokelo sebhedi, kunye nezibini zegiya ngesantya kunye nomphezulu wesilayidi esingaphezulu sokuhambisa, kukho ioyile yokuthambisa kwimpompo yeoyile yokujikeleza ukuthambisa.
Inkqubo yokuthambisa kunye nendawo yokuthambisa indawo yesicwangciso se-bullhead
Izinto eziphambili ezihamba ngesixhobo somatshini, ezinje ngesikhokelo sikaloliwe senqanawe, indlela yerocket, ibhokisi yegiye, ibhokisi yesondlo, njl.
Xa isixhobo somatshini siqalisiwe, impompo yeoyile iqala ukusebenza. Impompo yeoyile ifunxa ioyile yokuthambisa ukusuka echibini leoyile kwisiseko sebhedi ngesihluzi seoyile, kwaye siyidlulise kwisihlukanisi seoyile kunye nemibhobho yokuthambisa indawo nganye yesixhobo somatshini.
1. Xa umqadi uphakanyisiwe kwaye wehlisiwe, isikrufu sokutshixa kufuneka sikhulule kuqala, kwaye isikrufu kufuneka siqiniswe xa sisebenza.
2. Akuvumelekile ukulungelelanisa ukubetha kwenkunzi yegusha ngexesha lokusebenza kwesixhobo somatshini. Xa uhlengahlengisa ukubetha kwenkunzi yegusha, akuvumelekanga ukusebenzisa indlela yokucofa ukukhulula okanye ukuqinisa isiphatho sokulungisa.
3. Ukubetha kwenkunzi yegusha akuyi kudlula kuluhlu oluchaziweyo. Isantya esiphezulu asivumelekanga xa usebenzisa ukubetha ixesha elide.
4. Xa i-worktable inikwe amandla okanye ishukunyiswa ngesandla, nikela ingqalelo kumda we-screw stroke ukukhusela isikrufu kunye nenati ekuyekiseni okanye ekonakaliseni isixhobo somatshini.
Ubuninzi bokusika ubude (mm)
Ubuninzi bomgama ukusuka ezantsi kwenkunzi yegusha ukuya kumphezulu wetafile (mm)
Itafile ubuninzi zokuhamba tye (mm)
Itheyibhile yokuhamba nkqo ngokuthe nkqo (mm)
Umhlaba okhokelayo womcwangcisi ukulala ngaphandle komgama ophezulu
Ukufuduswa okuphezulu kwenkunzi yegusha
Ubuninzi ukujika engile worktable (akukho vice)
Ubuninzi ajike engile worktable (vice)
Uhambo olungaphezulu nkqo lwetreyini
Inani lemivimbo yenkunzi yegusha ngomzuzu
32, 50, 80, 125, amaxesha min
Inkunzi yegusha ngasemva nangapha isixa sesondlo setafile
Ukujikeleza ivili izinyo (nkqo)
Ujikeleze izinyo (ngokuthe tyaba)
Ujikelezo lwama-4 izinyo (nkqo)
Ujikelezo olujikelezayo lwizinyo ezi-4 (ethe tyaba)
Egqithileyo I-CD6241 lathe yencwadi
Okulandelayo: BK5030 cnc nkqo Umatshini wokubeka intsimbi
H50 metal ukujika cnc combo lathe wokugaya machi ...
ck6180 Heavy umsebenzi metal tyaba umatshini cnc ...
CK6180 umsebenzi onzima cnc metal ukujika lathe machi ...
I-TCK630 Ibhedi yokutsala i-CNC eLathe ene-Living Turret / ...